TUWF-47 Vahaolana amin'ny fikolokoloana tsara ho an'ny rivotra ho an'ny rivotra China Manufacturer
Description:Safe Cooling amin'ny Air Conditioning,Solon-drivotra ho an'ny rivotra,Solon-drivotra azo antoka amin'ny rivotra
Home > Products > Fiarovana amin&#39;ny fluoro-karbônina > Kilaometatra ho an&#39;ny fampandroana ny rivotra > TUWF-47 Vahaolana amin&#39;ny fikolokoloana tsara ho an&#39;ny rivotra ho an&#39;ny rivotra
TUWF-47 Vahaolana amin'ny fikolokoloana tsara ho an'ny rivotra ho an'ny rivotra
Anarana simika: Perfluorohexene
Ny ranon-drafitrasa fanadiovana ny fluolinated dia ny fihenan-tsakafo tsara, io vinaingitra bitika kely ambany kokoa noho ny rano madio; Afaka mikoriana tsara ary manaparitaka hafanana amin'ny rafitra fanaraha-maso ny fakan-tsary;
Ity dia tsy misy poizina, tsy mampidi-doza, tsy mampatahotra
Ny tsy fitovian-kevitra dielectric eo ambany 2 dia tsy mametraka ny angon-drakitra any amin'ny foibe momba ny data
Sakaizan'ny tontolo iainana, manana ny ODP sanda 0 sy ny sandan'ny GWP ambany
Fluorocarbon hihena antonony andian-dahatsoratra dia Perfluorinated rano akora, izay
manana dielectric avo. I T C ooling ny hafanana-niteraka ny famerana mari-pana.
Ny tsy fahampian'ny entona simika, dia azo ampiasaina betsaka amin'ny fisehoan-javatra hafahafa amin'ny hafanana hafanana.
Ny toetra mampiavaka ny dielectric :
* Ny Fluorine idealy hafanana hafanana mangatsiaka ary mety ho ampiasaina amin'ny fotoana isan-karazany mifehy hafanana hafahafa;
* Ny tavoahangy fantson-drivotra matevina amin'ny ranon-tsavony dia tena mora ihany. Misy ny fiverimberenana eo amin'ny asa, izay manalavitra ny hafanana amin'ny firoboroboana, hany ka manome antoka fa ny fizotran'ny hafanana dia afaka miasa tsara sy miorina tsara;
* Izany dia Tsy manana enti-mampidi-doza, tsy mivoatra ary tsy misy fipoahana, tsy misy afo sy ny teboka Fluorocarbon Refrigerant;
* Fiarovana tsara elektrika Fluorocarbon Refrigerant, fipoahana faran'izay ambony mihoatra 40KV;
Ny mari-pamantarana ara-batikan'ny vokatra:
Ity vokatra maromaro ity dia tsy ampiasaina betsaka amin'ny hafanana mifehy ny hafanana
ny rafitra fanodikodinana, indrindra ho an'ny rohy rehetra amin'ny famokarana semiconductor; fa
dia nampihetsi-po tokoa tamin'ny fanamainana lalina ho an'ny rafi-panadinana solosaina sy ny fanamafisam-peo hafa
ary ny famongorana ny hafanana, toy ny rivotra miteraka rivotra ary ny ao anaty fametrahana mpamorona, ny
fantson-drivotra fanalefahana ho an'ny tandroka fiakarana an-dàlam-be, ny rafitra fanadiovana ho an'ny fiara elektrôla
bateria sy phased array radar etc.
Ity vokatra maromaro ity dia feno 25kg / barrel, na ho an'ny mpanjifany.
Fanangonana sy fitaterana entana:
Ity fivarotana arifomba ity dia mora tahiry sy fitaterana.
Product Categories : Fiarovana amin'ny fluoro-karbônina > Kilaometatra ho an'ny fampandroana ny rivotra
Toeram-pandehan'ny fluorocarbon-écolage écologique écologique élément pour air conditioner Contact Now
Fitaovam-pamokarana fluoride ho an'ny klimatizasiona Contact Now
Toeram-ponenana ara-pahasalamana miaro ny tontolo iainana Contact Now
TUWF-47 Vahaolana amin'ny fikolokoloana tsara ho an'ny rivotra ho an'ny rivotra Contact Now
Toxicity mora vidy amin'ny rivotra fanalokalana Contact Now
Fitaovam-pitaterana enti-mamono amin'ny rivotra Contact Now
0 ODP Fluorocarbon Cooling Medium ho an'ny fikojakojan'ny rivotra Contact Now
Safe Cooling amin'ny Air Conditioning Solon-drivotra ho an'ny rivotra Solon-drivotra azo antoka amin'ny rivotra